Samsung Galaxy S3 ကို Android 7.1 GT-I9300 သို့မွမ်းမံနည်း | Androidsis
အံ့အားသင့်လောက်အောင်ပင်လူအများစုက Roms ၏ကမ္ဘာကြီးသည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာရောက်ရှိနေပြီဟုထင်ကြသည်။ ဤသည်မှာ Android Nougat သို့မဟုတ် Android7ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူ Roms ကိုစီမံကိန်းအနေဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Line OS ဒါမှမဟုတ်ဘာ Cyanogenmod ရဲ့ဆက်ဖြစ်လာမလဲ၊ ဒီနေ့မင်းကိုငါသင်ပေးမယ် Samsung Galaxy S3 ကို Android 7.1 Nougat သို့အဆင့်မြှင့်တင်.
ဒီလက် - အပေါ်သင်ခန်းစာ Samsung Galaxy S3 ကို Android 7.1 (သို့) Android Nougat ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်မလဲဆိုတာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သင်ပြပေးပါတယ်Gt-I9300 ကိုနိုင်ငံတကာမော်ဒယ်လ်အတွက်သာလူသိများသည်။ ဤတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆက်လက်ရှိနေသေးသည့် Samsung terminal ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုဒီမှာတွေ့လိမ့်မည်။ Samsung ၏ကြားမှ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အလွယ်တကူရွေ့လျားနိုင်သည်။ Android ဗားရှင်း။
1 Samsung Galaxy S3 ကို Android 7.1 Nougat model GT-I9300 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ချက်များ
2 Samsung Galaxy S3 ကို Android 7.1 Nougat (model GT-I9300) သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များ။
3 Samsung Galaxy S3 ကို Android 7.1 Nougat သို့ update လုပ်ပါတယ်
Samsung Galaxy S3 ကို Android 7.1 Nougat model GT-I9300 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ချက်များ
အကယ်၍ သင့်မှာ Terminal ကိုပြုပြင်ထားသော Root and Recovery နှင့်ရှိပြီးသားဖြစ်လျှင်၊ အဆင့် ၃ သို့တိုက်ရိုက်သွားပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Samsung Galaxy S3 GT-I9300 မော်ဒယ်လ်ရှိသည်
terminal ကိုယူထားပါ ပြုပြင်ထားသော Recovery နှင့်အတူ ငါသည်ဤပို့စ်တွင်သင်တို့ကိုပြသသကဲ့သို့.
သင်၏ TWRP Recovery မှတစ်ဆင့် system တစ်ခုလုံး၏ nandroid backup ကိုပြုလုပ်ပြီး၎င်းကို Galaxy S3 အပြင်ဘက်ရှိ sdcard ပေါ်တွင်လုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းပါ။
TWRP Recovery ကိုနောက်ဆုံးပေါ် version သို့ update လုပ်ပါ တရားဝင် TWRP အက်ပလီကေးရှင်း သို့မဟုတ် Flashify. ဒီ link ကနေ TWRP Recovery ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိနိုင်တဲ့ပုံကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာပြတယ် အောက်တွင်သင်အက်ပ်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လင့်များတွေ့လိမ့်မည်။
Recovery TWRP မှ EFS ဖိုင်တွဲ၏မိတ္တူကူးယူပါ Backup option မှ EFS ရွေးစရာကိုသာစစ်ဆေးပါ။
(optional), Titanium Backup ဖြင့်သင်၏အက်ပ်များနှင့်ဒေတာအားလုံးကိုအရန်ကူးယူပါ update လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရာရာတိုင်းကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မယ်။
Settings ထဲမှ USB debugging option ကို enable လုပ်ပြီးဘက်ထရီအားပြည့်ပါစေ။
တရားဝင် TWRP အက်ပလီကေးရှင်း
ရေးသားသူ: အသင်းကိုဦးဝင်း LLC
Samsung Galaxy S3 ကို Android 7.1 Nougat သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ (GT-I9300 ပုံစံ).
မင်းလုပ်ရလိမ့်မယ် compressed files ၂ ခုကို zip format ဖြင့် download လုပ်ပြီး decompress မလုပ်ဘဲ copy လုပ်ပါ Samsung Galaxy S3 ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်တွင်:
download လုပ်ပါ Samsung USB Driver
lineage-14.1-20170113-UNOFFICIAL-i9300.zip ကို download လုပ်ပါ
Gapps Android 7.1 Nougat ARM 32 bits ကို download လုပ်ပါ
Samsung Galaxy S3 ကို Android 7.1 Nougat သို့ update လုပ်ပါတယ်
လမ်းညွှန်ပုံသည် TWRP ၏နောက်ဆုံး version နှင့်မကိုက်ညီပါ
ငါလိုအပ်ချက်များကိုရှင်းပြပြီးငါလိုအပ်သောဖိုင်နှစ်ခု download လုပ်ပြီးသောအဆင့်အားလုံးကိုပြီးစီးပြီးနောက် ကျနော်တို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode မှာပြန်လည်စတင်နှင့်ဤအဆင့်များလိုက်နာပါလိမ့်မယ်:
သုတ်, ငါတို့ရွေးချယ်ပါ အဆင့်မြင့် Wipe y ကျွန်ုပ်တို့သည် Gapps နှင့် Rom တို့၏ zip ဖိုင်များကိုကူးယူခဲ့သည့်နေရာ မှလွဲ၍ ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ တနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို internal memory ထဲသို့ကူးယူခဲ့ပါက internal memory ထဲမှ Wipe ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုပြင်ပ SD ကဒ်သို့ကူးယူပါကဤလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အခြားသူများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အမှတ်အသားပြုပြီးတောင်းဆိုသောလုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်အောက်ခြေဘားကိုလျှောချပေးသည်။
Install y ကျနော်တို့ Rom ၏ Zip ကိုရွေးပါ ထို့နောက်အောက်ကဘားကိုရွှေ့နှင့်အရေးယူကွပ်မျက်ခံရသည်။
ကျနော်တို့ option ကိုပြန်ရောက်သည်အထိကျနော်တို့ပြန်သွားပါ Install y ကျနော်တို့ Gapps ၏ Zip ကိုရွေးပါ သို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အက်ပ်များကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
လှုပ်ရှားမှုဘားကိုပြန်ရွှေ့ပြီး Gapps ၏မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အဆုံးသတ်သောအခါရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးပါ dalvick နှင့် cache ကိုသုတ်ပါ ၎င်းသည် Reboot System ဘေးရှိ slider bar ၏ညာဘက်အောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်လာသည်။
ထို Wipes ပြုလုပ်ရန်ဘားကိုကျွန်ုပ်တို့လျှောချပြီးပြီးသည်နှင့် option ကိုရွေးချယ်ပါ ပြီးရင် System ကို Reboot လုပ်ပါ.
ပထမဆုံး reboot လုပ်တဲ့အခါ terminal ကိုလုံးဝ start up လုပ်ဖို့လိုအပ်တာထက်အနည်းငယ်ပိုကြာလိမ့်မယ်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ပုံမှန်ဖြစ်လို့ operating system တပ်ဆင်ပြီးကတည်းက ၁၀ မိနစ်လောက်တောင်မှဖြစ်နိုင်တယ်။ ၎င်းကိုလုံးဝဖွင့်လိုက်သည်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ိုင်ဖိုင်၊ ဂူဂဲလ်အကောင့်အတွက်အီးမေးလ်ကဲ့သို့သောဒေတာများနှင့်ပြုပြင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်မျှထိတွေ့စရာမလိုဘဲလည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်ပြီးသွားသည်။
ပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန်ပြန်ဖွင့်တယ်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုလုံးဝပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါကဤတစ်ကြိမ်ပြန်လည်စတင်မှုသည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏အက်ပ်များကို Titanium Backup ဖြင့်အရံသိမ်းဆည်းထားပါက၊ ၎င်းသည် application ကို install လုပ်ရန်နှင့် app များအားလုံးပြန်လည်ထားရှိရန်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်သည်စင်စစ်အားဖြင့်လုံးဝသန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုနှင့် terminal ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောလည်ပတ်မှုအတွက်အရာအားလုံးကိုခြစ်ရာကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်ရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။
ဤနည်းဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏လက်ရှိတရားဝင် Galaxy S3 တွင်နောက်ဆုံးပေါ် Android version ကိုခံစားပါ နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Samsung Galaxy S3 ကို Android 7.1 GT-I9300 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
jessika မော်ရာ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ဗင်နီဇွဲလားမှကျွန်ုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ movistar လိုင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ s3 gt i9300 သည် WiFi ကိုတစ်မိနစ်မှအခြားသို့ဆက်သွယ်ခြင်းရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့်ကွန်ယက်များကိုအသိအမှတ်ပြုသော်လည်း၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှုမရှိတော့ပါ။ ထပ်ဆောင်းပြီးတော့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
jessika mora အားစာပြန်ပါ
Androidsis သူငယ်ချင်းများ Nougat ကို s3 i9300 သို့ထည့်ရန်သင်ခန်းစာယူခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည် update လုပ်ခြင်းဟုပြောသည့်နေရာတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်သောအခါ၊ "configuration wizard токтоထားသည်" ဟုပြောသော window တစ်ခုကိုစတင်ဖွင့်လာသည်။ ဖုန်းမှမည်သည့်အရာကမှ system ကို load မလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
ယေရှု SANTIAGO အိပ်ချ် ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်းဂျူလီယို၊ အဲဒါကိုသင်ဖြေရှင်းပြီး Nogaut ကို install လုပ်ခဲ့သလား။ ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ကျွန်တော့်မှာ backup ရှိထားပြီး Belly Jean 4.3 သို့ပြန်အပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း၊
ယေရှု SANTIAGO H. ကိုပြန်ပြောပါ
စကားမစပ်, ယခုငါဘယ်လို root နိုင်မလဲ?
ငါခြေလှမ်းအားလုံးကိုလှမ်းလိုက်ပြီး JULIO ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်စတင်သောအခါ“ configuration wizard дайымရပ်တန့်သွားသည်” ဟူသောစာကိုပေးလိုက်သည်။ ထို မှနေ၍ မရပါကကျွန်ုပ်သည်အစပိုင်းတွင် android logo အသစ်ကိုသာတွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည် မင်းဘယ်လိုလုပ်
Samsung Galaxy S3 ကို ၇.၁.၁ သို့အဆင့်မြှင့်ပါကရေဒီယိုပျောက်ဆုံးသွားပါသလား။ ငါဒါကိုအင်တာနက်မှာမလိုဘူး၊ ဒီဖုန်းမှာရှိတဲ့ရေဒီယိုကိုငါ update လုပ်တယ်၊ ရှာမတွေ့ဘူး
အန်တိုနီယိုယရှေုလိုပက်ဇ် vergara ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ ထိုနောက်မှ, သင် google play နှင့်မည်သည့် installation ကိုဘယ်လို install နိုင်မလဲ?
Antonio Jesús Lopez vergara ကိုပြန်ပြောပါ
Zulia လမ်း ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Gt-i9300 သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗားရှင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုမည်သို့သိနိုင်ပါသလဲ။
Sony သည် Nougat update ကို Xperia Z5, Z3 + နှင့် Z4 Tablet များမှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်
Instagram Stories ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ